Vaovao - Aiza ny fiara, aiza i Rayone
Tao anatin'ny enin-taona, ny kodiarana Rayone dia niova avy tamin'ny zazalahy tsy manam-pahalalana ho lasa tanora feno hafanam-po, ary avelao isika hivoatra amin'ny laggard tsy misy laza ho olona miavaka amin'ny indostrian'ny kodiarana, ary ny tompony mbola manohitra ny Courage matanjaka kokoa.
Tamin'ny 15 Desambra 2014 no teraka ny kodiarana voalohany an'ny Rayone. Ny “fiainana kely” voalohany izay nitondra ny fanahin'ny fahaterahan'i Rayone dia teraka tao amin'ny Industrial Park an'ny County Yihuang, Fuzhou City, Provinsi Jiangxi. Na dia somary mbola tsy matotra aza ny teknolojia tamin'izany fotoana izany dia tsy mandroso ny fitaovana ary tsy voatonona amin'ny indostrian'ny kodiarana isika, saingy nanonofy izahay tamin'izany fotoana izany mba hanao ity "fiainana kely" kanto ity ary ity kodiarana antsoina hoe Dima ity tokoa miseho eo amin'izao tontolo izao. Na aiza na aiza vazan'izao tontolo izao, miseho amin'ny fiara rehetra eran'izao tontolo izao, mba samy te hitondra ny filaminana izay entin'ny kodiarana Rayone ho azy ireo.
Ny famokarana ny kodiarana voalohany dia nampitombo ny fahatokisanay tena. Nahatonga anay hahatsapa ny firaisan'ny ekipanay ary nahatonga anay hahatsapa ny fahatapahan-kevitray. Raha mbola manamboatra ny saintsika sy miasa mafy isika dia azo antoka fa hahatratra ny tanjontsika ary hahatanteraka ny nofinay. Ny fahatsoram-po sy ny tso-po, ny fanavaozana, ny fikirizana, ny hakingan-tsaina ary ny tolona dia nanjary fitsipi-piainana sy asa iarahan'ny olona Dima mangina rehetra. Ampiharintsika amin'ny vokatra rehetra ataontsika, ary amin'ny fiainana sy asa rehetra izany. Zavatra. Izany dia takiana amin'ny vokatra tsirairay avy, ary koa takiana amin'ny tenantsika. Mino izahay fa ny kodiaranay tsirairay avy dia asa kanto tonga lafatra, ary mino izahay fa ny kodiaranay tsirairay avy dia maneho finiavana handroso. . Mikiriza amin'ny fanovana ireo tetik'asa misy kodiarana miaraka amin'ny fanavaozana ara-teknolojia, ary manamboara marika mpamokatra kodiarana malaza eran-tany amin'ny indostria.
Tamin'ny volana martsa 2020, natsangana ny ekipa e-varotra niampita sisintany voalohany an'i Rayone roda Hub, nanamarika ny fikarohana vaovao nataon'ny orinasa momba ny maodely ara-barotra taloha ivelan'ny Internet ho maodely ara-barotra e-varotra vaovao. Nanomboka ny paikadin'ny marika roa-tserasera sy ivelany izahay. Tamin'io taona io ihany dia nanokatra ny fivarotanay tao amin'ny Station International Alibaba izahay. Hatramin'ny volana novambra dia nahazo magazay kintana 5 izahay. Ny habetsahan'ny fifanakalozana an-tserasera dia nahatratra 96.6447.5 dolara amerikana. Etazonia, Thailand, Canada, Philippines, Australia ary firenena hafa dia samy manana fifanakalozana ary nahitana vokatra tsara ny zava-bitany an-tserasera.
Toa lavitra be, nefa toa eo am-pelatanana ihany. Enin-taona lasa izay, tsy nanantena izahay fa hitombo amin'ny haavony ankehitriny afaka enin-taona. Ny zava-bita sy voninahitra marobe azo tao anatin'ny enin-taona dia midika koa fa nahatratra ny tampon'izany isika, saingy tsy midika izany fa afa-po isika. Hifindra any amin'ny tampon'ny avo kokoa isika. Izany no nofinofin'ny Dima tsirairay, ary izany no tian'ny Dima rehetra atao-Aiza ny fiara, aiza i Rayone.